Ị nwere ike ịnụ banyere onye na-aụụ ma ọ bụ onye na-agụ akwụkwọ, ma mara na ha bụ ngwá ọrụ ahịa dị mkpa iwu בלוג ma ọ bụ azụmahịa.
Ndị mmadụ bụ ngwá ahịa ahịa dị ike, yana isi ihe onye ọhụụ dị elu na njikota aka. אתר n’inyere gị aka ịghọta ndị na-ege gị ntị, ndị mmadụ nwere ike ịme ngwa ọ bụla nke usoro ahia gị ngwa ngwa, dị mfe, ma dịkwuo irè.
Nike a post ga-ejegharị gị site na kpọmkwem ndị mmadụ bụ, ihe mere ha ji dị ka ngwá ọrụ dị ike, na otú ị nwere ike iji ha tolite בלוג gị ma ọ bụ azụmahịa.
2 Gịnị רק ndị mmadụ ji dị mkpa?
3 נתונים של קדו Ọ Kwesịrị Ịna-agụnye?
4 Otu esi chịkọta נתונים maka ndị mmadụ
6 Kedu ihe b downside?
Na mkpokọta, onye na-aụụ ahịa persona (nke a na-akpọ "onye na-agụ akwụkwọ" ma ọ bụ "profaịlụ na-agụ ihe" maka ndị na-ede blọgụ) bụ nkọwa nkọwa nke data nke onye na-anọchite anya ndị na-ege ntị gị ma ọ bụ ndị na-eleta anya. אוניאדו ממאדו היו אתרי אייקולוגיה ואוגולוגיה לאתרם של אומומה, אוקווה אוקלה ואוללה חדשים.
Dị ka onye na-aụụ ahịa onye ọkachamara n’ịzụlite טוני זמביטו,
"אחד מהארכים לא אחים ניוכא (אטל) nke onye ndị na-azụ ahịa bụ, קדו ha na-agbalị imezu, ihe ih mgbaru ọsọ na-akpa àgwà ha, otu ha si eme ya -הד, otú ha ụzụta, na יא סתם ha na-eme mkpebi ịzụ. "
Gịnị רק ndị mmadụ ji dị mkpa?
האם יא נא ị na-agbalị ịbịakwute ederede בלוג maka mmalite mmalite gị.
Ị Maara na ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị na-ege gị ntị daa mbà, ọ ga-adịrị gị mma ntụgharị uche. Ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị bụ "onye ọ bụla," ị ga-agbaso isiokwu ndị na-amasị onye ọ bla. Enweghị ike, nri?
Kwuo mmalite gị bụ ngwaahịa na-echekwa aha ahịa nke ezubere maka ecommerce. Ị Maara na ndị na-ege gị ntị bụ azụmahịa ndị azụmahịa, nihi יה ị nwere ike ugbu a na ndepụta nke פוסט בלוג echiche na ecommerce ulo oru nwere ike mmasị na.
Ị na-atụle onye nwe obere aụụmahịa azụmahịa, ma ọ bụ onye njikwa ahịa nke nnukwu ụlọ ọrụ? Mkpa ha na nsogbu ha ga – adị nnọọ iche. Akwukwọ mgbasa ozi nke na-enyere onye nwe ụlọ ahịa aka nwere ike ịbụ nnukwu ọnụọgụ ma ọ bụ dị mfe maka njikwa ahịa.
Nke ahụ bụ otu ihe mere ndị mmadụ ji azụ ahịa dị nnọọ ike: ndị na-ege gị ntị na-echetara gị ọnụ, otú ahụ ka ị na-elekwasị anya ahịa gị. Onye na-azụ ahịa na-enye gị ohere ịele לייזר-lekwasị anya ahịa gị ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ n’ozuzu ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ mmadụ, ma ọ bụ otu onye.
נתונים של קדו Ọ Kwesịrị Ịna-agụnye?
אההה, ụrụ na ibu ọrụ
Ụdị ọdịnaya a chọrọ (פוסטים בבלוגים, pọdkastị, אינפוגרפיה, שקופיות, wdg.)
… Mana echekwala na ịkwesịrị itinye ihe niile. Ọ nwere ike ịdị mfe ịdahie na nkọwa ndị na-adịghị mkpa. Echegbula onwe gị banyere ụmụaka ole ma ọ bụ anụ ụlọ gị nwere, ma ọ na-a teaụ tii ma ọ bụ kọfị (belụsọ na ọ gbasara aụụmahịa gị), ma ọ bụ na ị kwesịrị ịkpọ ya ma Naanị na-echegbu onwe gị banyere nkọwa ndị sitere na ezigbo data ma na-emetụta otu i si aga ije gị.
לבה anya na ihe bara uru, ihe omuma nke ị ga-enwe ike iji na ahia gi, dika ihe ndi ozo nke ndi ahia gi, ihe ndi ha choro, na nsogbu ndi ha na eche.
Otu esi chịkọta נתונים maka ndị mmadụ
Ọ bụ ezie na ndị na-aụụ ahịa bụ akụkọ ifo, חה קַה גַא-אֲדַבֵּר n’ezi נתונים.
Kedu ka i si chịkọta נתונים אה? Ị היו ike:
Gwuo n’ime nchịkọta gị. Ma ị na-eji Google Analytics ma ọ bụ ọrụ ọzọ, ị ga-enwe ike ịnweta ụdị ngosi ndị mmadụ n’ozuzu nke nwere ike ime ka ị nọrọ n’okporo ụzọ dị mma maka ịzụlite ezi onye.
Zipụ nnyocha. אתה יכול לשלוח דוא”ל g, ndị ahịa, ma ọ bụ ndị ahịa, ị nere היו ike izipu nyocha iji chịkọta נתונים ị chọrọ.
נתונים על נתונים ị na-ekpokọta, ị nwere ike ịchọta ihe dị ichiche, ma jiri ozi ahụ mee ka ndị mmadụ nwee ike ịchọta ezigbo onye na-achọta data.
Ị nwere ike תבנית iji si si hubspot או echekwa ịmalite, ma gbanwee, gbasaa, ma ọ bụ mee ka ọ dị mfe iji gboo mkpa gị.
Hubspot ntuziaka na תבנית mara mma ị nwere ike iji dị ka mmalite.
Ndị mmadụ na-enyere gị aka ịchọta ọdịnaya gị na elele anya לייזר. Ị na-akparịta ụka n’otu n’otu kama ịnwa iti mkpu n’ime ìgwè mmadụ.
Ọ bụghị naanị na ị maara ihe mkpesa dị mma new ndị ahịa gị na ndị na-agụ gị, ma ebe ịchọta ndị ọrụ ahụ. Na ịme nnyocha gị, ị ga-achọpụta ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma na ntanetị mgbasa ozi na ebe ndị ahịa gị dị mma, אתה סתם ị maara kpọmkwem ebe ị ga-ere ahịa.
A pụkwara iji ndị mmadụ kee ndị na-ege gị ntị ma mepụta ọdịnaya ahaziri maka nke ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọta ụdị dị iche iche nke ndị ahịa dị mma, ị nwere ike ịmepụta onye ọhụụ zuru ezu maka otu ọ bụla, wee nwee ike ịmepụta ọdịnaya dị iche ke ị iche iche.
Ndị mmadụ abụghị nanị maka azụmahịa; ha bụkwa ụzọ dị mma isi wuo ndị na-ege ntụrụndụ ọ bụla. Na ezigbo onye na-agụ ihe ọmụma, ọ na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịbịakwute kpọmkwem הודעה בבלוג isiokwu na gị na-agụ ga-n’anya. Ọ ga-enyekwa gị echiche na ọdịnaya ndị ọzọ iji mepụta, usoro ego ego nke ga-arụ ọrụ, na otu esi azụ ahịa gị ma wulie gị agụ.
Kedu ihe b downside?
Eleghị anya otu ihe kpatara ya bụ na onye ahụ nwere ike iwepụta oge ma dị oke ọnụ iji mepụta. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ziri ezi, ndị nwere נתונים, ọ ga-adị mkpa iji oge mee nchọpụta ahụ. מא ị na-etinye ọnụ nyocha, nchịkọta na ichota אתר na nchịkọta נתונים, ma ọ bụ na-ewe oge iji jụọ ndị ahịa ajụjụ ọnụ, ọ bụ אגו.
Ụfọdụ ndị ahịa na-ekwupụtakwa na ọ nwere ike isi ike ma bụrụ ihe na-emerụ ahụ maka azụmahịa iji gbalịa itinye onye na-azụ ahịa ọnụ na mmalite nke azụmahịa na azụma.
כמו מרקוס שרידן dere, sị,
Ruo mgbe ị na-aụụ ahịa ruo oge ụfọdụ, ma nweta ohere iji rụọ ọrụ na ọtụtụ ndị ahịa, ọ gaghị ekwe omume ịmara onye ezigbo mmadụ gị bụ.
Ruo mgbe i nweela ohere ụmepụta ọdịnaya (ghọọ ezigbo onye nkụzi) ma lee ihe natapụta na ihe na – adịghị (ka ị na – ege ndị na – ege gị ntị ntị n’oge niile) ọ gaghị ekwe omume ịmara onye.
אה, na otu okwu ikpeazụ: Ebe ọ bụ na azụmahịa gị na-agbanwe mgbe niile, otú ahụ ka onye na-azụ gị dị.
Ọ na-egosikwa na nke ahụ, usoro mgbagwoju anya iji mepụta onye na-aụụ ahịa ga – eweta "nchịkọta nchịkọta," na ịkwụsị ahịa ọ bụla.
יא סתם, אוליי אוטו ị גַה – אֶסֵי זֶרֶה נְסוּגבו אַה מַווְטָה אֶרֶו נַקְיָה נַאי נַע – עַזְהָה?
O nwere ike ị ga – אתר uru erite n’aka onye zuru ezu zụrụ ahịa ma ọ bụrụ na:
אני לא שייך לצערנו אוקיי באנייר נאד אייג ‘kpọmkwem ị na-agbalị ịlele.
בלוג gị ma ọ bụ azụmaahịa anọwo gburugburu ruo nwa oge, ma ị nwere ndị ahịa zuru ezu ma ọ bụ ndị na-agụ akwụkwọ iji kpokọta נתונים באתר mma na.
… mgbe אה, onye ọzọ bụ isi nwere ike ịbara gị aka, ma onye nwere ihe ọmụma zuru ezu nwere ike ịpụta na foto a.
Ozugbo i kere mmadụ gị, iwere ike ha ka ha bụrụ aka na:
סיעור מוחות בלוג isiokwu. Oge ọzọ ị na-eche echiche banyere פוסט פוסט, dọpụta onye zụrụ gị maka mkpali. Ọ bụrụ na ị nyochaa ndị ahịa gị banyere nsogbu na ajụjụ ha, ị ga-enwerịrị ihe ọmụma maka פוסטים בלוג.
הבלוג של אידה אדרדה. מגבה ị na-ede ihe ndị ị na-eme, cheta ihe ị na-eche. Chee echiche de ederede הבלוג ka ka mkparịta ụka na ma ọ bụ edegara otu onye ede akwụkwọ ozi.
Ide ederede weebụ. מגבה ị na-ede ebe obibi gị, banyere ibe, ibe ịkpọtụrụ, FAQ, wdg, chee echiche banyere ihe onye ị chọrọ ịhụ n’ebe ahụ na otu ị nwere ike isi zaa ajụjụ ha wee malite naọ naụụụ.
Ghọta ọdịnaya ọzọ. Nd pod na-eleta anya gị ga – ahọrọ ige ntị na podcast, hụ ihe ọmụma, ma ọ bụ ibudata ebook? Olee isiokwu ndị ha ga-achọta kacha nyere aka ma dị mkpa? Onye gị ga – enyere gị aka ịchọpụta.
Iwuli ndị na-ege gị ntị. אתר na onye gi, iwere isi iyi nke netwọk mgbasa ozi ọha na eze kwesịrị ịdị na ya, blọọgụ ndị ha na-agbaso na ị nwere ike post ndị ọbịa na, na ihe ọmụma nke ozi ha tụkwasịị ị.
Na usoro ahia gị niile, אתר מלמיט na onye gị ga-enyere gị aka ịkwado ndị na-ege gị ntị ma nweta nsonaazụ dị mma.
Ị nwere ike ịnụ banyere onye na-azụ ma ọ bụ onye na-agụ akwụkwọ, ma mara na ha bụ ngwá ọrụ ahịa dị mkpa iwu blogg ma ọ bụ azụmahịa.
Ndị mmadụ bụ ngwá ahịa ahịa dị ike, yana isi ihe onye ọhụụ dị elu na njikota aka. Site n’inyere gị aka ịghọta ndị na-ege gị ntị, ndị mmadụ nwere ike ịme ngwa ọ bụla nke usoro ahia gị ngwa ngwa, dị mfe, ma dịkwuo irè.
Nke a post ga-ejegharị gị síða na kpọmkwem ndị mmadụ bụ, ég bara ha ji dị ka ngwá ọrụ dị ike, na otú ị nwere ike iji ha tolite bloggịịọọọọụụụụụụịị.
2 Gịnị aðeins ndị mmadụ ji dị mkpa?
3 Kedu gögn Ọ Kwesịrị Ịna-agụnye?
4 Otu esi chịkọta gögn gera ndị mmadụ
6 Kedu ihe bụ ókostur?
Na mkpokọta, onye na-azụ ahịa persona (nke a na-akpọ "onye na-agụ akwụkwọ" ma ọ bụ "profaịlụ na-agụ ihe" maka ndị na-ede blọgụ) bụ nkọwa nkọwa nke data nke onye na-anọchite anya ndị na-ege ntị gị ma ọ bụ ndị na-eleta anya. Onye mmadu nwere ike inwe ogologo oge site na obere ihe omuma nke okwu ole na ole new akwukwo ihe omuma na nkowa.
"Onye na-ere ahịa bụ ihe archetypal na-eme nyocha (atụle) nke onye ndị na-azụ ahịa bụ, Kedu ha na-agbalị imezu, ihe íhe mgbaru ọsọ na-akpa àgwà ha, otu ha si eme ya -eche, otú ha ịzụta, na já bara ha na-eme mkpebi ịzụ. "
Gịnị aðeins ndị mmadụ ji dị mkpa?
Voru ya na ị na-agbalị ịbịakwute ederede blogg maka mmalite mmalite gị.
Kwuo mmalite gị bụ ngwaahịa na-echekwa aha ahịa nke ezubere maka ecommerce. Ị maara na ndị na-ege gị ntị bụ azụmahịa ndị azụmahịa, n’ihi ya ị nwere ike ugbu a na ndepụta nke bloggfærsla Echiche na ecommerce ulo oru nwere ike mmasị na.
Ị na-atụle onye nwe obere azụmahịa azụmahịa, ma ọ bụ onye njikwa ahịa nke nnukwu ụlọ ọrụ? Mkpa ha na nsogbu ha ga – adị nnọọ sess. Akwukwọ mgbasa ozi nke na-enyere onye nwe ụlọ ahịa aka nwere ike ịbụ nnukwu ọnụọgụ ma ọ bụ dị mfe maka njikwa ahịa.
Nke ahụ bụ otu ihe bara ndị mmadụ ji azụ ahịa dị nnọọ ike: ndị na-ege gị ntị na-echetara gị ọnụ, otú ahụ ka ị na-elekwasị anya ahịa gị. Onye na-azụ ahịa na-enye gị ohere ịlele laser-lekwasị anya ahịa gị ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ n’ozuzu ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ mmadụ, ma ọ bụ otu onye.
Kedu gögn Ọ Kwesịrị Ịna-agụnye?
Ụdị ọdịnaya a chọrọ (bloggfærslur, pọdkastị, infografics, skyggnur, wdg.)
… Mana echekwala na ịkwesịrị itinye ihe niile. Ọ nwere ike ịdị mfe ịdahie na nkọwa ndị na-adịghị mkpa. Echegbula onwe gị banyere ụmụaka ole ma ọ bụ anụ ụlọ gị nwere, ma ọ na-a teaụ tii ma ọ bụ kọfị (belụsọ na ọ gbasara azụmahịa gị), ma ọ bụ na ị kwesịrị ịkpọ ya Jane Naanị na-echegbu onwe gị banyere nkọwa ndị sitere na ezigbo data ma na-emetụta otu i si aga ije gị.
Leba anya na ihe bara uru, ihe omuma nke ị ga-enwe ike iji na ahia gi, dika ihe ndi ozo nke ndi ahia gi, ihe ndi ha choro, na nsogbu ndi ha na eche.
Otu esi chịkọta gögn gera ndị mmadụ
Ọ bụ ezie na ndị na-azụ ahịa bụ akụkọ ifo, ha ka ga-adabere n’ezi gögn.
Kedu ka i si chịkọta gögn ahụ? W nwere ike:
Zipụ nnyocha. Þú hefur ekki sent tölvupóst á tölvupósti, ekki sent, það er ekki hægt að senda það, en það er ekki hægt að nota gögnin og gögnin.
Gögn um vefsvæði ị na-ekpokọta, w nere ike ịchọta ihe dị icheiche, ma jiri ozi ahụ mee ka ndị mmadụ nwee ike ịchọta ezigbo onye na-achọta data.
Ị nwere ike iji sniðmát si Hubspot eða echekwa ịmalite, ma gbanwee, gbasaa, ma ọ bụ mee ka ọ dị mfe iji gboo mkpa gị.
Hubspot var ntuziaka na sniðmát mara mma ị nwere ike iji dị ka mmalite.
Ndị mmadụ na-enyere gị aka ịchọta ọdịnaya gị na elele anya leysir. Ị na-akparịta ụka n’otu n’otu kama ịnwa iti mkpu n’ime ìgwè mmadụ.
Ọ bụghị naanị na ị maara ihe mkpesa dị mma nye ndị ahịa gị na ndị na-agụ gị, ma ebe ịchọta ndị ọrụ ahụ. Na ịme nnyocha gị, ị ga-achọpụta ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma na ntanetị mgbasa ozi na ebe ndị ahịa gị dị mma, þú aðeins ị maara kpọmkwem ebe ị ga-ere ahịa.
A pụkwara iji ndị mmadụ kee ndị na-ege gị ntị ma mepụta ọdịnaya ahaziri maka nke ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọta ụdị dị iche iche nd n ahịa dị mma, ị nwere ike ịmepụta onye ọhụụ zuru ezu maka otu ọ bụla, wee nwee ike ịmepụta ọdịnaya dị iche el.
Ndị mmadụ abụghị nanị maka azụmahịa; ha bụkwa ụzọ dị mma isi wuo ndị na-ege ntụrụndụ ọ bụla. Ég vil að ég sé að tala um það, þú munt ekki sjá hvað þú vilt að bloggfærsla sé bloggfærsla á næstunni. Ọ ga-enyekwa gị echiche na ọdịnaya ndị ọzọ iji mepụta, usoro ego ego nke ga-arụ ọrụ, na otu esi azụ ahịa gị ma wulie gị agụ.
Kedu ihe bụ ókostur?
Eleghị anya otu ihe kpatara ya bụ na onye ahụ nwere ike iwepụta oge ma dị oke ọnụ iji mepụta. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ziri ezi, ndị nwere gögn, ọ ga-adị mkpa iji oge mee nchọpụta ahụ. Ma ị na-etinye ọnụ nyocha, nchịkọta na ichota síða na nchịkọta gögn, ma ọ bụ na-ewe oge iji jụọ ndị ahịa ajụjụ ọnụ, ọ bụ ego.
Sem Marcus Sheridan dere, sị,
Ruo mgbe i nweela ohere ịmepụta ọdịnaya (ghọọ ezigbo onye nkụzi) ma lee ihe natapụta na ihe na – adịghị (ka ị na – ege ndị na – ege gị ntị ntị n’oge niile) ọ gaghị ekwe omume ịịmaraye á.
Ya mere, olee otu ị ga – esi zere nsogbu ahụ ma nweta uru nke onye na – azụ ahịa?
O nwere ike ị ga – erite uru site n’aka onye zuru ezu zụrụ ahịa ma ọ bụrụ na:
Ég var með echiche zuru oke banyere ndị na-ege ntị kpọmkwem ị na-agbalị ịlele.
Blogg ị ma ọ bụ azụmaahịa ogọwo gburugburu ruo nwa oge, ma ị nwere ndị ahịa zuru ezu ma ọ bụ ndị na-agụ akwụkwọ iji kpokọta gögn dị mma síða.
… mgbe ahụ, onye ọzọ bụ isi nwere ike ịbara gị aka, ma onye nwere ihe ọmụma zuru ezu nwere ike ịpụta na foto a.
Ozugbo i kere mmadụ gị, ég nwere ike ha ka ha bụrụ aka na:
Hugarflug bloggfærsla isiokwu. Oge ọzọ ị na-eche echiche banyere post post, bætir því að þú munt gera mkpali. Ọ bụrụ na ị nyochaa ndị ahịa gị banyere nsogbu na ajụjụ ha, ị ga-enwerịrị ihe ọmụma maka innlegg blogg.
Ide ederede bloggið. Mgbe ị na-ede ihe ndị ị na-eme, cheta ihe ị na-eche. Chee echiche ịde ederede blogg ị ka mkparịta ụka na ma ọ bụ edegara otu onye ede akwụkwọ ozi.
Ide ederede weebụ. Mgbe ị na-ede ebe obibi gị, banyere ibe, ibe ịkpọtụrụ, FAQ, wdg, chee echiche banyere ihe onye ị chọrọ ịhụ n’ebe ahụ na otu ị nwere ike isi zaa ajụjụ ha wee malite weyịọịụụụụ.
Iwuli ndị na-ege gị ntị. Site na onye gi, i nwere isi iyi nke netwọk mgbasa ozi ọha na eze kwesịrị ịdị na ya, blọọgụ ndị ha na-agbaso na ị nwere ike post ndị ọbịa na, na ihe ọmụma nke ozi ha tụkwasịị ị.
Na usoro ahia gị niile, ịmalite síða na onye gị ga-enyere gị aka ịkwado ndị na-ege gị ntị ma nweta nsonaazụ dị mma.